Ingabe Ukukhanyisa Esigumbini Sakho Sokugeza Kungokwanele?
Ikhaya / Blog / Ingabe Ukukhanyisa Esigumbini Sakho Sokugeza Kungokwanele?
2021 / 09 / 13 UkwahlukanisaBlog 511 0
Isikhala sokugezela njengendawo yokuphumula nokuphumula
Idlala indima ebalulekile empilweni yasekhaya
Phakathi kwazo, kunezikhuthazo eziningi nobuchule bokuphila
zihluma lapha ukuze zikhule
Le nkinga, ikuthathe ukuthi uhlole ukuthi ungakudala kanjani ukukhanyisa kwendlu yangasese!
Ukushisa kombala wokukhanyisa isikhala sendawo yokugeza
Isibani sendawo yangasese akufanele sikhanye kakhulu noma sibe mnyama kakhulu. Ukukhethwa kokushisa kombala ku-4000-5000K kungaba njalo. Lo mbala okhanyayo ungakha indawo yokukhanya elula ethambile.
Ishadi lokushisa lokukhanyisa umbala
Izindawo ezahlukahlukene zokusebenza kokuhlelwa kokukhanyisa
Indlu yangasese ihlukaniswe kakhulu ezindaweni ezintathu ezisebenzayo: indawo yokugeza, indawo yangasese, indawo yokuwasha. Izidingo zokukhanyisa endaweni ngayinye zihlukile, ngakho-ke ukwakheka kokukhanyisa kwendawo yokugezela akufanele kuhlangane kuphela nezidingo eziyisisekelo zokukhanyisa, kepha futhi kuhlangabeze nezidingo ezihlukile zokusebenza.
Indawo yokugeza ivame ukuhlukaniswa "endaweni yokugeza" kanye "nendawo yobhavu". Lokhu kungaba khona ngasikhathi sinye, kepha futhi ngokuzimela. Izindawo ezahlukahlukene zinemiklamo ehlukene yokukhanyisa. Ukukhanya kwendawo yeshawa kungafakwa ophahleni, kusetshenziswa i-downlight noma i-design strip efihlekile. Lokhu kulula ukugeza ngakolunye uhlangothi, ngakolunye uhlangothi, nakho kungakha umoya.
Ukugeza kuyindlela engcono yokuphumuza umzimba nengqondo yakho. Imichilo embalwa yamalambu noma amalambu wethrekhi endaweni yobhavu angakha umoya wokugeza omnene futhi onethezekile.
Lapho ukhetha izinto zokukhanyisa indawo yangasese, ukusebenza nokuba lula kufanele kunikezwe kuqala. Abantu abaningi badlala omakhalekhukhwini noma bafunde lapho besebenzisa indlu yangasese, ngakho-ke ukukhanyisa endaweni yangasese kungabhekwa lapho kuklanywa futhi kukhethwe ukuthi kuyahlangabezana yini nezidingo zokukhanyisa zokufunda.
Indawo yokuwasha ayiqukethe kuphela umsebenzi wokuwasha nokuhlanza, kepha futhi inesidingo sokwenza izimonyo, ngakho-ke indawo inesidingo esikhulu kakhulu sokukhanya. Ungafaka ngqo izibuko zesibuko noma uhlele amalambu azungeze isibuko. Umphumela wokukhanyisa ngezibani nxazonke ngeke wenze izinzwa ezinhlanu zibe nezithunzi futhi zikwazi nokususa ukwakheka. Ngaphezu kwalokho, izibani zodonga zingafakwa yisibuko ukwengeza umuzwa wokuyinkimbinkimbi empilweni.
Edlule :: Ukukhula Kwe-371% VS 70% Yehla! Ngabe Umncintiswano Womakethe Wendawo Yonke Yangasese Usufinyelele Esigabeni “Esimhlophe Esishisayo”? Olandelayo: Ubani Othi Izindlu Zokugeza Ezincane Azinakuba Ephakeme? Izindlela eziyi-11 Zokwenza Bakhulu Futhi Zihle Kakhulu